बन्धनाले गरिबको करोडौ ठ’गेर भाग्न खोज्दा यसरि समात्यो ! महिलाद्वारा कार्यालय घेराउ (भिडियो सहित)
शनिबार, असोज १७, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ : अहिले सहर देखि गाउँसम्म अनगिन्ति सहकारी संस्थाहरु खुलेका छन् । जति पनि सहकारीहरु खुलेका छन् तीनले ठगी गर्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढीरहेको छ । सहकारी संस्थाहरु खुल्ने र भाग्ने क्रमको कुनै सीमा छैन । गल्ती गर्नेलाई कारबाही नहुनाले सहकारीले खुलेआम ठ’गी गरिरहेका छन् ।
गरिब सर्वसाधारणले मिहिनत गरेर जम्मा गरेको पैसा हिनामिना गरेर भाग्ने क्रममा रहेका बन्दना बहुउदेशयीय सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक फन्दामा परेका छन् । चन्द्रगिरी नगरपालिका सतुंगलमा रहेको उक्त सहकारीले गरिबले दु:ख गरेर कमाएको पैसा हिनामिना गर्दै आएको खुलासा भएको छ ।
संकटको समयमा आफ्नो पैसा माग्दा पनि सहकारीका संचालकले कुराको बेवास्ता गरेको सदस्यले गुनासो गरेका छन् । आफुले बचत गरेर राखेको पैसा माग्दा समेत संचालकले थर्काउने गरेको सदस्यले आरोप लगाएका छन् ।
उक्त सहकारीबाट ठगिएकाहरुले कार्यालय घेराउ गरेका छन् भने संचालक र सदस्यबीच चर्काचर्की नै परेको छ । सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको भन्ने खबर प्राप्त भएपछि हाम्रो टिमले उक्त सहकारीका संचालकसँग गरेको कुराकानी बिस्तृतमा भिडियोमा हेर्नुहोला :
उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलँदै जाँदा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने गुर्जो वितरण पनि बढ्न थालेको छ। गुर्जोको बिरुवा, धुलो, डाँठ र चिया निःशुल्क वितरणमा लागेका अभियानकर्मी कमलबहादुर राजलवटले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा माग अनुसार वितरण गरिएको जानकारी दिए। आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहानका कार्यालय प्रमुख राजलवटले सरकारी निवास रहेको स्थानमा उत्पादन गरेको गुर्जोको बिरुवा देशव्यापी निःशुल्क वितरण गरिएको बताए।
हालसम्म करिब ९० हजार वटा गुर्जाको बिरुवा निःशुल्क वितरण गरिएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाको दुवाकोटमा ३००, धुलो, चिया र डाँठ समेत वितरण गरिएको छ। खाली पेटमा मनतातो पानीमा गुर्जोको धुलो राखेर खाएमा तरोताजा अनुभव हुने गरेको छ। पातञ्जल योग समिति, चक्रपथ सफाइ अभियानको पश्चिम खण्डमा गरी ३ सय ५० वटा गुर्जो वितरण गरिएको छ।
यसैगरी त्रिभुवन विश्वाविद्यालयको राजनीति शास्त्र, भूगोल लगायत चार विभागमा करिब ४ सय बिरुवा वितरण गरिएको छ। महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. १ इमाडोलमा पनि ३ सय बिरुवा हस्तान्तरण गरिएको अध्यक्ष राजलवटले जानकारी दिए। यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १० मा पनि गुर्जोको बिरुवा निःशुल्क वितरण गरिएको छ। वडा अध्यक्ष रामकुमार केसीलाई कोरोना पोजेटिभ भएकालाई दिने गरी ३० किलो गुर्जोको धुलो समेत वितरण गरिएको छ।
यसैगरी गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित निर्माणधीन राष्ट्रिय सहिद स्मारकस्थलमा ५ सय बिरुवा हस्तान्तरण गरिएको छ। यी बिरुवा शनिबार रोपिनेछ। अभियानकर्मी राजलवटले लहानको सरकारी निवास रहेको करिब १० कठ्ठा जमिनमा जडिबुटी रोपेका छन्। जसबाट हालसम्म कैयौंलाई निःशुल्क गुर्जो, धुलो लगायत वितरण गरिएको छ। वाग्मती लगायत उपत्यकाका नदी किनारमा यसअघि गुर्जो रोपिएको छ। उपत्यकामा एक घर एक गुर्जो बिरुवा रोपण अभियानमा लागिएको अभियानकर्मी राजलवट बताउँछन्।
गुर्जोले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मौसमी रुघाखोकी लगायत रोगका लागि औषधिको काम गर्ने गरेको छ। गर्भवती महिला र पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि भने गुर्जो सेवन गराउन हुँदैन। आयुर्वेद शास्त्रको ‘यस्य देशस्य यो जन्तोः तस्य तद् औषधं हितम्’ अर्थात् जुन स्थानमा मानिस जन्मन्छन् तिनलाई औषधिको काम गर्ने वनस्पति त्यहीँ हुन्छ भन्ने भावना अनुसार देशव्यापी रुपमा गुर्जो रोपण अभियानलाई तीव्र बनाइएको हो।
अभियानले कोरोना पोजेटिभ भएकालाई गुर्जोको धुलो वितरण अभियानलाई समेत तीव्र बनाएको छ। गुर्जोको धुलो मन तातो पानीमा मिसाएर एक हप्ता सेवन गर्ने कोरोना पोजेटिभ भएकामा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने बताइएको छ।